ဗမာလို သတင်းစာပြန် – ၁ | White Boy Learning Burmese
July 29, 2013 by Win Hein	16 Comments
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် ရေးအမှုအရာတိုးတက်အောင် ဆောင်းပါးအမျိုးအသစ်ကို ရေးစပါမယ်။ ဒီဆောင်းပါးအမျိုးကို “သတင်းပြန်များ”လို့ခေါ်ပါမယ်။ ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဇာတိမြို့ရဲ့ သတင်းစာတွေက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရွေးမယ်ပြီးတော့ ဗမာလိုပြန်ရေးမယ်။ ပထမဆောင်းပါးအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဇာတိမြို့မှာ ဗမာစားသောက်ဆိုင်အသစ်အကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးပါတယ်။
New restaurant adds to growing number of Burmese businesses
စားသောက်ဆိုင်အသစ်သည် ပိုပြီးကြီးနေသော ဗမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထည့်သည်။
Aung Htaw, 35 and his mother Don Ma Ngay, 54, are the latest Burmese to openabusiness in Fort Wayne.ကိုအောင်ထော်၊ အသက် ၃၅နှစ် ပြီးတော့ သူ့အမေ ဒန်မငဲ၊ အသက် ၅၄နှစ်တို့က ဖို့ဝိန်းမြို့၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပွင့်သည့် အခေတ်အပေါ်ဆုံးသော ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြပါသည်။
The new business is the Pad Thai Restaurant, 3307 E State Blvd. They specialize in Thai and Burmese cuisine. Aung Htaw said they have more Thai on their menu then Burmese because Thai food can be prepared faster than traditional Burmese dishes.
သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်သည် ၃၃၀၇ အရှေ့ State Blvd.လမ်းပေါ်၌ရှိသော ဖတ်ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်က ထိုင်း နှင့် ဗမာ အချက်အပြတ်များကို အထူးပြုသည်။ အောင်ထော်သည် ထိုင်းအစားစာ ဗမာအစားအစာထက် ပိုမှန်မှန် အသင့်ပြင်ဆင် နိုင်ကြောင့် စားသောက်ဖွယ်စာရင်း၌ ဗမာအစားအစာထက် ထိုင်းအစားအစာ ပိုရှိပါသည် ဟုပြောခဲ့ပါသည်။
Fourteen years ago, Aung Htaw and his mother came to America from the Rajburi Camp on the Thai-Burma border. They lived in Harrisburg, Penn., for eight months before moving to Fort Wayne, where they had friends and family.
၁၄ခုနှစ်တုန်းက အောင်ထော် နှင့် သူ့အမေတို့သည် ထိုင်းနယ်နိမတ်၌ရှိသည့် ရာဇ်ပူရီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အမေရီကန်နိုင်ငံသို့ လာကြပါသည်။ ဖို့ဝိန်မြို့သို့ ရွှေပြောင်းမတိုင်မီ မိတ်ဆွေ နှင့် မိသားစုရှိသောနေရာ Pennsylvaniaပြည်နယ်၊ Harrisburgမြို့၌ အချိန် ၈လလောက်နေထိုင်ကြခဲ့သည်။
His mother has worked for Vera Bradley over the years, but always cooked for people on the side.
အောင်ထော်ရဲ့ အမေသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတွင် Vera Bradley၌အလုပ်လုပ်ပြီပေမယ့် တခြားလူများအတွက်လည်း မြဲစားချက်ပြီ။
“She worked in Burma asafood contractor atacollege food court,” Aung Htaw said.
အောင်ထော်သည် “ဗမာပြည်မှာ သူဟာ အစားအစာပဋိညဉ်လုပ်သူလို အလုပ်လုပ်တယ်”ဟုပြောခဲ့သည်။
Aung Htaw has spent his time in Fort Wayne working and learning to speak English. He took some classes forawhile but eventually foundafactory job at Kautex Inc. in Avilla.
အောင်ထော်သည် ဖို့ဝိန်းမြို့၌ အလုပ်လုပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ရန် အချိန်ကြာပြီ။ ခဏလောက် အတန်းတစ်ချို့ယူပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ Avilaမြို့၌ Kautex Inc.၌ စက်ရုံအလုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီ။
“Every day, I think about going back to school,” Aung Htaw said.
အောင်ထော်သည် “နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကျောင်းပြန်တာအကြောင်းစဉ်းစားတယ်”ဟုပြောခဲ့သည်။
Aung Htaw would needaGED and then go onto college. So far that hasn’t worked out, but even at 35, he remains positive he will go back.
အောင်ထော်သည် ပထမဆုံး GEDဘွဲ့လို့မည်ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ကိုဆက်သွားမည်။ အခုလောက် အဆင်မပြေသေးပေမယ့် အသက် ၃၅နှစ်ရှိသတောင် အောင်ထော်သည် သူကျောင်းပြန်မှာသေချာသည်။
The new restaurant opened Jan. 19, and for the eight months prior to that he and his mother were involved in setting up the business. It hasn’t been easy; it involvesalot of paperwork and procedures to follow, not to mention to setting up the kitchen to meet the standards of the Fort Wayne-Allen County Department of Health food safety measures.
ဒီစားသောက်ဆိုင်အသစ်သည် ဇန်နဝါရီလ ၁၉ရက်ဖွင့်ပြီးတော့ ဖွင့်အထိ ၈လပေါင်း သူ နှင့် သူ့အမေသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အသင့်ပြင်ဆင်တာကို အလုပ်ရှုတ်ကြခဲ့သည်။ ဒီအခြေအနေသည် မလွယ်ဘူး။ ရုံးစာလုပ်ငန်းများစွာ နှင့် လိုက်တာလိုအပ်သော ပြုလုပ်ပုံလုပ်နည်းများစွာ နှင့်ဆိုင်ပါသည်။ စကားမစပ် ချမ်းမာရေးဋ္ဌာန ဖို့ဝိန်း−အလ္လင်မြို့နယ်ရဲ့ အစားအစာလုံခြုံခြင်းအတန်းများအရ ထမင်းချက်ခန်းကို အသင့်ပြင်ဆင်တာလည်း မလွယ်ပါဘူး။
Aung Htaw said his name is on the business but it is really his mother and his aunt who put up most of start-up money.
အောင်ထော်သည် သူ့နာမည်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ စာချုပ်၌ရေးထားပေမယ့် တကယ်လို သူ့အမေ နှင့် သူ့အဒေါ်တို့သည် စားသောက်ဆိုင်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန် ဖိုက်ဆံအများစု စုကြခဲ့သည်။
“We still aren’t making any money, but we can cover our costs and pay the help,” Aung Htaw said.
အောင်ထော်သည် “ကျနော်တို့ ပိုက်ဆံ အများကြီးမရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အကြွေးတွေကိုပေးနိုင်ပြီး အလုပ်သူတွေကိုပေးနိုင်တယ်”ဟုပြောခဲ့သည်။
Running the business had beenanew experience for Aung Htaw and his mother.
ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ပိုင်ဆိုင်သည် အောင်ထော် နှင့် သူ့အမေတို့အတွက် အတွေ့အကြုံအသစ်ဖြစ်ပြီ။
“We don’t have an accountant,” Aung Htaw said.
အောင်ထော်သည် “ကျနော်တို့မှာ စာရင်းတွက်သောသူမရှိဘူး”ဟုပြောခဲ့ပါသည်။
There areagrowing number of Burmese businesses in Fort Wayne, Minn Myint Nan Tin, executive director of the Burmese Advocacy Center said, including restaurants, grocery stores,abeauty salon andatech store.
Burmese Advocacy Centerရဲ့ အုပ်စိုးစီရင်သောသူ ဒေါ်မင်းမြင့်နန်းတင်သည် ဖို့ဝိန်းမြို့၌ ဗမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကုန်တိုက်များ၊ အလှပြင်ဆိုင် တစ်ဆိုင်၊ ပြီးတော့ အနည်းပညာဆိုင် တစ်ဆိုင်တို့သည် ပိုပြီးပွင့်နေသည်ဟုပြောခဲ့ပါသည်။
Minn Myint Nan Tin said they are doing an educational session the first weekend in April to help small business owners learn more about managing their finances. Aung Htaw said he plans on attending.
ဒေါ်မင်းမြင့်နန်းတင်သည် ဧပြီလ ပထမ ပတ်ဆုံး၌ သေးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်သူများကို သူတို့ရဲ့ အကောက်အခွန်များကို အုပ်ချုပ်ကြောင်း ကူညီအောင် ပညာပေးအစီအစဉ်တစ်ခု ပေးမည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။
For now, the new restaurant is relatively simple: two rows of tables onaclean tile floor, withacounter and cash register at the back. In the future Aung Htaw said he envisions making the décorablend of Asian and western to appeal to both cultures. He would like to addalounge so people could gather and sit and talk.
အခုတော့ ဒီစားသောက်ဆိုင်အသစ်သည် ရိုးသားသည်။ သန့်ရှင်းသော အုပ်ကြွပ်ပါသည့် ကြမ်းပြင်အပေါ်၌ စားပွဲ ၂စဉ်ရှိပြီး အောက်၌ကျတော့ ငွေရေတွက်ရာနေရာ တစ်ခု နှင့် ငွေသိမ်းစက်တစ်စက်ရှိသည်။ အောင်ထော်သည် အနာဂတ်၌ ဒီယဉ်ကျေးမှု ၂မှုကို အယူခံဝင်ရန် ယာဉ်ကျေး၍လျောက်ပတ်ခြင်းကို အေရှာစတိုင် နှင့် အနောက်ကစတိုင်ရောသည့် အရောအနှောလို ဖန်တီးတာဟု မြင်တွေ့သည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ ပြီးတော့လည်း သူသည် လူများသည် စု၍ပေါင်းကြ၊ ထိုင်ကြ၍ ဆွေနွေကြရန် loungeတစ်ခုကိုလည်းထည့်ချင်ပါသည်။
Aung Htaw said he visited numerous restaurants in Indiana before setting up theirs; he wanted to appeal to both cultures with the décor. He said he also visited all the other Thai restaurants in the town, and no one has the same Pad Kee Mai on their menu that they do; it is their specialty. The taste, Aung Htaw said, comes from the special sauce they make. It is made from fresh ground red chilies and they usealot of fresh basil in the dish as well.
အောင်ထော်သည် သူတို့ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို အုပ်ချုပ်မတိုင်မီက အင်ဒီယားနာပြည်နယ်၌ရှိသည့် စားသောက်ဆိုင်များစွာကို အလည်သွားခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှု ၂မှုကို ယာဉ်ကျေး၍လျောက်ပတ်ခြင်းနှင့် အယူခံဝင်ချင်ခဲ့သည်။ သူပြောသည်လည်း ဒီမြို့၌ရှိသည့် အခြားထိုင်းစားသောက်ဆိုင်များကိုလည်း အလည်သွားပြီးတော့ ဘယ်သူမှ သူတို့ရဲ့ စားသောက်ဖွယ်စာရင်း၌ သူတို့ရှိသလို ဖတ်ခီးမိုင်းမရှိကြဘူး။ ဖတ်ခီးမိုင်းသည် သူတို့ရဲ့ ထူးခြင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အောင်ထော်သည် အနံ့အရသာလည် သူတို့ရဲ့ ချက်သည့် ထူးခြားသော အချဉ်ရည်ကလာပါသည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ အချဉ်ရက်သည် သစ်လွင်ပြီး ပိချေသော ငရုပ်သီးများကလာပြီးတော့ သစ်လွင်သော ပင်စိမ်းမျိုးကိုလည်းအများကြီးသုံးပါသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
Hours for the restaurant are Tuesday through Sunday, 10 a.m. – 8 p.m.
စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ နာရီများသည် အင်္ဂါနေ့မှ − တနင်္ဂနွေနေ့အထိ မနက် ၁၀နာရီမှ − ၈နာရီအထိဖြစ်ကြပါသည်။
16 thoughts on “ဗမာလို သတင်းစာပြန် – ၁”
ဟေ…….. ငါ့ကောင် လန်းလှ ချေလားဟ…. ဒီနေ youtube မှာ ကြည့်ရင်း မင်းဆိုက်ဒ်ကို တွေ့ လို ၀င်လာတာ.. အမလေး.. မြန်မာ စာ ဘာသာပြန်ချက် က ကျွတ်ဆင်. ငါ့ထက်တောင် တော်မယ်
ဒီဆိုက်ဒ်ကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ့ 😀
July 30, 2013 at 05:50
Ko Win Hein:
Great job on the translation! It’sapretty hefty story with lots of details.
I tookaquick glance and jotted down some corrections I might suggest.
Your translation of the title is accurate to the letter, butabit awkward in Burmese. I might translate it as “တိုးပွားနေသောမြန်မာစီးပွားလုပ်ငန်းများမှာ စားသောက်ဆိုင်အသစ်ထပ်တိုးလာ.”
“The latest” in “the latest Burmese to open business …” is better translated as “ယခုနောက်ဆုံး” to indicate they are the ones to launchabusiness most recently. “ခေတ်အပေါ်ဆုံး” would mean the mother-son duo is “modern” or “fashionable.”
I can’t be sure, but the mother’s name might be misspelled. Instead of Don Ma Ngay, it probably is Daw Ma Ngay, or “ဒေါ်မငယ်” in Burmese.
I noticedamisspelling in the translation of “cuisine.” It should be “အချက်အပြုတ်”–not “အချက်အပြတ်”
“Can be prepared faster” might be better translated as “မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချက်ပြုတ်”
“14 years ago” is usually “လွန်ခဲ့သော၁၄နှစ်က” If you say “၁၄ခုနှစ်” it might be mistaken as 14th century.
I’d probably translate “cooked for people on the side” as “တဖက်၌အခြားသူများအတွက် …”
“Food contractor atacollege food court” isatricky one, because there’s no easy Burmese word for contractor in this sense. The Burmese words for college and university are the same. InaBurmese school campus, the food sellers are set up inarow in the canteen, not inacourt. Taking all these into consideration, I’d translate the above as “သက္ကသိုလ်စားသောက်ဆိုင်တန်းမှာချက်ပြုတ်သူလုပ်ခဲ့တယ်”
“Going back to school” might be better translated as “ကျောင်းဝြန်တက်ဖို့”
“Eight months prior to [the opening of the restaurant]” should be “မဖွင့်ခင်၈လ၌” If you write “ဖွင့်အထိ ၈လပေါင်း” it means “8 months until the opening.”
A minor misspelling in Health Department. “Health” should be “ကျန်းမာရေး” (“ချမ်း” is the word for “chill” or “cold.”)
The English expression “not to mention” is better translated as “မပြောနဲ့တော့” In Burmese, it usually goes to the end of the sentence. “စကားမစပ်” is suitable if you’re saying “By the way …” or “At any rate …”
I might be able to add some more suggested edits, but that’s all for now.
July 30, 2013 at 11:58
Your Burmese skill is impressive. But you still need in grammar and proposition. I suggest you to write directly in Burmese with your own words instead of translation word by word from English. In my opinion, I think it is faster and more efficient to improve writing in learning any language.
“New restaurant adds to growing number of Burmese businesses” should be literally translated as စားသောက်ဆိုင်အသစ်သည် ပိုများလာသော ဗမာပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရေအတွက်ကို တိုးစေသည်။
August 23, 2013 at 00:48
August 23, 2013 at 01:01
In the future Aung Htaw said he envisions making the décorablend of Asian and western to appeal to both cultures.
In the future = နောင်အနာဂတ်တွင် (or) နောင်အခါတွင်
the décor = အဆင်အပြင်
a blend of Asian and western = အရှေ့တိုင်းနှင့် အနောက်တိုင်းပုံစံများ ရောစပ်ထားမှု
to appeal to both cultures = အရှေ့တိုင်းသားများ၊ အနောက်တိုင်းသားများ နှစ်မျိုးလုံးကို ဆွဲဆောင်ရန် (or) အရှေ့တိုင်းသားများရော အနောက်တိုင်းသားများပါ စိတ်ဝင်စားစေရန်
အရှေ့တိုင်းသားများရော အနောက်တိုင်းသားများပါ စိတ်ဝင်စားစေရန် ဆိုင်၏ အဆင်အပြင်ကို အရှေ့တိုင်းနှင့် အနောက်တိုင်းပုံစံ ရောစပ်ထားမည်ဟု သူ မြင်ယောင်မျှော်လင့်ထားကြောင်း ထင်ကျော်မှ ပြောဆိုပါသည်။
August 23, 2013 at 01:02
အရှေ့တိုင်းသားများရော အနောက်တိုင်းသားများပါ စိတ်ဝင်စားစေရန် နောင်အနာဂတ်တွင် ဆိုင်၏ အဆင်အပြင်ကို အရှေ့တိုင်းနှင့် အနောက်တိုင်းပုံစံ ရောစပ်ထားမည်ဟု သူ မြင်ယောင်မျှော်လင့်ထားကြောင်း ထင်ကျော်မှ ပြောဆိုပါသည်။
August 23, 2013 at 03:47
This isawow! Please let me give you some correction since i amateacher and the teaching spirit is flowing through my vain. This isaformal context and you used formal particles in most cases, but i can still find many informal particles like ဒီ၊ ပြီးတော့၊ ရဲ့၊ တုန်းက etc.
It would be the best if you exchange these words into ဤ၊ ထို့နောက်၊ ၏၊ ထိုအချိန်က၊ etc…
မြန်မာစကားကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဂုဏ်လည်ယူပါတယ် ။
အားပေးပါတယ်။ မြန်မာလိုအသုံးအနှုန်းတွေ ပိုလေ့လာစေချင်ပါတယ်
December 11, 2013 at 20:56
ွှYou seem to mix the two registers – literary and colloquial,alot. These are in some ways similar to Norwegian Bokmal and Nynorsk. In Burmese, we tend to stick to one register for one article. Most private popular publications usea“mid-way” position, blending the literary and colloquial registers while the state-own print media (and Burmese texts produced by US or Australian government or the Vatican – especially the Roman Missal translations) are good examples of the literary register. I hope you find my comment helpful.
I changed my registers if I was translatingaquote. Also at the time there were certain literary registers I didn’t know like ဆိုရင် = လိုပါက. Thanks for your comment. If you could, please write corrections.
January 23, 2014 at 05:23
ခင်ဗျားတို့ အင်္ဂလိပ် လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ G-O-O-D good
ကျုပ်တို့ မြန်မာ လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ *ကောင်းတာပေ့ါဗျာ*